UThando Thabethe uzongena ohlelweni lwantambama njengoba uDJ Fresh ephumile | Scrolla Izindaba
UThando Thabethe uzongena ohlelweni lwantambama njengoba uDJ Fresh ephumile
UThando Thabethe uqokelwe ukuthatha izintambo ohlelweni lwantambama lukaDJ Fresh oluzobizwa ngokuthi i- “947 Drive with Thando.”
Osaziwayo emsakazweni uDJ Fresh no-Euphonik bamiswa phakathi noMasingana ngemuva kokuvezwa kwezinsolo zokudlwengula ezibhekiswe kulaba bobabili. La macala ahoxiswa ngoNhlolanja yi-NPA, yathi abukho ubufakazi obanele bokushushisa laba bobabili.
“UThando unesipiliyoni esingaphezulu kweminyaka eyishumi kwezokuzijabulisa futhi ukhombisile ukuba ngumethuli ophumelelayo futhi onesiphiwo ngesikhathi sakhe emisakazweni eyahlukene,” kusho umphathi wesiteshi uThando Makhunga.
“Usemncane, unamandla futhi ungowesifazane onethalente eliningi, onomdlandla nokulangazelela okuyisibonelo esihle kubo bonke abantu baseNingizimu Afrika abanesibindi sokufinyelela futhi basebenzele amaphupho abo.”
Umlingisi nomethuli wezinhlelo emsakazweni uThabethe umemezele ekhasini lakhe ku-Twitter ngoMsombuluko ukuthi uzoba ngumethuli omusha wohlelo lwantambama.
“Ngijabule kakhulu ngokubuyela emsakazweni nokuthi ngithintwe umsakazo ophole kakhulu waseGoli. Kuyajabulisa, ngangihlale ngiwuthanda umsakazo njengomthombo wokuxhumana nabantu ngoweqiniso ngomculo nangengxoxo,” kusho uThabethe, ekhuluma nomlingani wakhe omusha azobamba naye u-Alex Caige.
“Angisakwazi ukulinda ukubuyela ngemuva kombhobho bese ngifaka isandla ekulalelweni kwesiteshi.”
I-947 Drive with Thando iqala mhla zingama-23 ngoNdasa.
Umthombo Wezithombe: @TrueLove